“အောငျမွငျမှုဆီကိုဆှဲချေါသှားနိုငျမယျ့ အလအေ့ထ (၁၀)ခု” - ONE DAILY MEDIA
အောငျမွငျမှုကို အဓိပ်ပါယျသတျမှတျတဲ့ နရောမှာ တဈဦးနဲ့တဈဦး တူညီတယျလို့ ထငျပါသလား? သငျ့အတှကျ အောငျမွငျမှုအဓိပ်ပါယျက ဘယျလိုပဲဖွဈနပေါစေ အောကျမှာဖျောပွတဲ့ အောငျမွငျသူတှရေဲ့လကျကိုငျထားတတျတဲ့ အလအေ့ထ ( ၁၀)ခုကို ရေးမှတျထားပွီး လိုကျနာကွညျ့ပါ။
သူတို့တှဟော နရောတိုငျးမှာ ဒီအခကျြတှကေို ကငျြ့သုံးလရှေိ့ကွပါတယျ။
(၁) အောငျမွငျသူတှဟော ပနျးတိုငျတှေ ခမြှတျကွပါတယျ
ပနျးတိုငျမရှိဘဲ အောငျမွငျနတေဲ့သူကို သငျတှမွေ့ငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ သငျဟာ အခုဘယျကို သှားနသေလဲ ဆိုတာကို မသိရငျ ရောကျခငျြရာကိုရောကျနပေါလိမျ့မယျ။ဒါကွောငျ့ ပနျးတိုငျခမြှတျခွငျးဟာ အောငျမွငျခငျြတဲ့ သူတှအေတှကျ နံပါတျ(၁)အခကျြ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။
(၂) တာဝနျယူမှု အပွညျ့ရှိတယျ
အောငျမွငျမှုတှကေ တဈစုံတဈခုဟာ အလုပျမဖွဈတော့ဘူးဆိုရငျ တဈခွားသူတှကေို အပွဈတငျနမေယျ့အစား သငျခနျးစာကိုပဲရအောငျ ယူပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ မအောငျမွငျသလဲဆိုတာကို လလေ့ာကွတယျ။ ပွီးရငျ ရှဆေ့ကျသှားကွပါတယျ။
(၃) သူတို့မှာ ကိုယျပိုငျစညျးကမျးတှရှေိကွတယျ
ကိုယျပိုငျစညျးကမျးဆိုတာ အောငျမွငျသူတိုငျးရဲ့ လက်ခဏာတဈခုပါ။ သငျတဈယောကျတညျး ဖွဈနတေဲ့အခါ Social mediaတှကေိုပဲ ထိုငျသုံးနမှောလား။ YouTube က Videosတှပေဲ ထိုငျကွညျ့နတေော့မှာလား။ ဒါမှမဟုတျ သငျ့အနာဂါတျအတှကျ အကြိုးရှိတဲ့အရာ တဈခုခုကို လုပျဖို့ အခြိနျပေးမှာလား။ သငျ့မှာ အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ ရညျမှနျးခကျြနဲ့ ပွတျသားတဲ့ ပနျးတိုငျတှေ ရှိနမေယျဆိုရငျ ကိုယျပိုငျ စညျးကမျးတှေ ခမြှတျရတာ ပိုပွီးလှယျကူ နပေါလိမျ့မယျ။
(၄) သူတို့မှာ အမွဲတိုးတကျခငျြစိတျ ရှိကွတယျ
သငျ့ကိုယျသငျ အရှုံးပေးလိုကျမယျဆိုရငျ သငျဟာ အောငျမွငျနိုငျမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ တိုးတကျခငျြရငျ သငျယူမှုအသဈတှကေို ပွုလုပျရမှာပါ။ ဆရာသမားကောငျးတှေ၊ အကြိုးရှိမယျ့ အသံဖိုငျတှေ၊ စာအုပျဖတျခွငျးတှကေနေ သငျယူမှုတှပွေုလုပျပါ။ ပွီးရငျ သငျ့ရဲ့စိတျကို ဖှံ့ဖွိုးလာအောငျ ကွိုးစားပါ။ လလေ့ာမှုတှေ ပွုလုပျနိုငျလလေေ ဝငျငှတှေေ ရှာဖှေ နိုငျလလေပေါပဲ။
(၅) စာအလှနျ ဖတျကွတယျ
အောငျမွငျသူအမြားစုရဲ့ အတိတျကအခြိနျတှေ ပွနျကွညျ့ရငျ သူတို့ဟာ မအောငျမွငျခငျကတညျးက စာအလှနျဖတျကွတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ အောငျမွငျသူတှကေ တဈယောကျတညျး နရေတာကို ပိုပွီး ပြျောရှငျ သဘောကတြတျပါတယျ။ တဈယောကျတညျး တိတျတိတျလေးနပွေီး စာဖတျဖို့ အခှငျ့အရေးယူမယျ။ ဒါမှမဟုတျ သူတို့ စိတျခှနျအားအတှကျနဲ့ အနာဂါတျအတှကျ အကြိုးရှိစမေယျ့ အသံဖိုငျတှေ ဟောပွောပှဲတှကေို နားထောငျနတေတျပါတယျ။
(၆) အခြိနျကို အကြိုးရှိစှာ အသုံးခကြွတယျ
အောငျမွငျသူတှဟော အကြိုးမရှိတာတှအေတှကျ အခြိနျမပေးကွဘူး။ အလအေ့လှငျ့ခံလေ့ မရှိကွပါဘူး။ ဘာဝတျမယျ၊ ဘာစားမယျ၊ ဘာဝယျမယျ စသဖွငျ့ fashion design တှေ၊ အစားအသောကျတှေ၊ အသုံးအဆောငျ ပစ်စညျးတှနေဲ့ပါတျသတျပွီး အခြိနျကုနျ မခံတတျကွပါဘူး။
(၇) သူတို့ဟာ စှနျ့စားမှုကိုသဘောကကြွပါတယျ
သငျဟာ ထီလကျမှတျ မဝယျဘူးဆိုရငျ ထီပေါကျမှာလညျး မဟုတျပါဘူး။ မစှနျ့စားရဲရငျ အောငျမွငျမှုဆိုတာလညျး ရမှာမဟုတျပါဘူး။ အောငျမွငျသူတှဟော သူတို့ဖွဈခငျြတာကို ဖွဈဖို့ စှနျ့စားရမယျ့ အခြိနျတှရေောကျ လာလိမျ့မယျဆိုတာကို နားလညျထားကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အလငျြမလိုတတျကွပါဘူး။ဖွဈခငျြတာတှေ ဖွဈလာဖို့ စိတျရှညျတတျကွပါသေးတယျ။ စှနျ့စားဖို့ လိုအပျမှလညျး စှနျ့စားတာက ကောငျးပါတယျ။
(၈) အောငျမွငျသူတှဟော အတားအဆီးတှေ ကြျောဖွတျလို့ ရှဆေ့ကျသှားကွတယျ
ကြှနျတျောတို့တှအေားလုံးရဲ့ဘဝမှာ အနှောငျ့အယှကျဆိုတာ ရှိနမှောပါ။ စိတျကူးအိပျမကျရှိတဲ့လူတိုငျး အရှုံးတရားတှကေို ခံစားကွရတာပါပဲ။ အမြားစုကတော့ အရှုံးပေးပွီး ထှကျပွေးကွပါတယျ။ အောငျမွငျသူတှကေတော့ ဘယျတော့မှ ထှကျမပွေးကွပါဘူး။ သူတို့က ရှဆေ့ကျသှားကွပါတယျ။
(၉) အောငျမွငျဖို့ နညျးလမျးတှေ ရှာကွတယျ
အောငျမွငျသူတှဟော အခကျအခဲတှကွေားက ရုနျးထှကျနိုငျဖို့ နညျးလမျးတှေ ရှာကွပါတယျ။ နညျးလမျးတဈခုက အလုပျမဖွဈရငျ အလုပျဖွဈမယျ့ နောကျထပျ နညျးလမျးတဈခုကို ရှာဖှကွေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ပနျးတိုငျကိုတော့ ဘယျတော့မှ မပွောငျးလဲ ကွပါဘူး။
(၁၀) သူတို့ဟာ သူတို့ခဈြတာကိုပဲ လုပျကွတယျ
သငျခဈြတာကို သငျမလုပျရငျ သငျဟာ အောငျမွငျလိမျ့မယျလို့တော့ အတိအကပြွောလို့ မရတော့ဘူး။ ပိုကျဆံအတှကျ သငျ့ဘဝရဲ့ အခြိနျအမြားစုကို သငျဝါသနာ မပါတဲ့အရာတှလေုပျရငျး ဖွုနျးတီးနမေယျဆိုရငျ ဒါဟာ အောငျမွငျနတေဲ့ ဘဝတဈခုလို့ သတျမှတျလို့ မရနိုငျတော့ပါဘူး။
ဘဝအခွအေနအေရ သငျဝါသနာမပါတာကို လုပျနရေခြိနျမှာ ခဏလောကျ သညျးခံထားပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျခဈြတဲ့အရာကို လုပျဖို့ ဘယျတော့မှ ကွောကျရှံ့ မနပေါနဲ့။ ငှကွေေးတဈခုထဲ နောကျကိုလဲ မလိုကျပါနဲ့။
အောင်မြင်မှုကို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်တဲ့ နေရာမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တူညီတယ်လို့ ထင်ပါသလား? သင့်အတွက် အောင်မြင်မှုအဓိပ္ပါယ်က ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ အောက်မှာဖော်ပြတဲ့ အောင်မြင်သူတွေရဲ့လက်ကိုင်ထားတတ်တဲ့ အလေ့အထ ( ၁၀)ခုကို ရေးမှတ်ထားပြီး လိုက်နာကြည့်ပါ။
သူတို့တွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ ဒီအချက်တွေကို ကျင့်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
(၁) အောင်မြင်သူတွေဟာ ပန်းတိုင်တွေ ချမှတ်ကြပါတယ်
ပန်းတိုင်မရှိဘဲ အောင်မြင်နေတဲ့သူကို သင်တွေ့မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ အခုဘယ်ကို သွားနေသလဲ ဆိုတာကို မသိရင် ရောက်ချင်ရာကိုရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် ပန်းတိုင်ချမှတ်ခြင်းဟာ အောင်မြင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် နံပါတ်(၁)အချက် ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
(၂) တာဝန်ယူမှု အပြည့်ရှိတယ်
အောင်မြင်မှုတွေက တစ်စုံတစ်ခုဟာ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် တစ်ခြားသူတွေကို အပြစ်တင်နေမယ့်အစား သင်ခန်းစာကိုပဲရအောင် ယူပါတယ်။ ဘာကြောင့် မအောင်မြင်သလဲဆိုတာကို လေ့လာကြတယ်။ ပြီးရင် ရှေ့ဆက်သွားကြပါတယ်။
(၃) သူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းတွေရှိကြတယ်
ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းဆိုတာ အောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ သင်တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတဲ့အခါ Social mediaတွေကိုပဲ ထိုင်သုံးနေမှာလား။ YouTube က Videosတွေပဲ ထိုင်ကြည့်နေတော့မှာလား။ ဒါမှမဟုတ် သင့်အနာဂါတ်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့အရာ တစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ အချိန်ပေးမှာလား။ သင့်မှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ပန်းတိုင်တွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် စည်းကမ်းတွေ ချမှတ်ရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူ နေပါလိမ့်မယ်။
(၄) သူတို့မှာ အမြဲတိုးတက်ချင်စိတ် ရှိကြတယ်
သင့်ကိုယ်သင် အရှုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အောင်မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တိုးတက်ချင်ရင် သင်ယူမှုအသစ်တွေကို ပြုလုပ်ရမှာပါ။ ဆရာသမားကောင်းတွေ၊ အကျိုးရှိမယ့် အသံဖိုင်တွေ၊ စာအုပ်ဖတ်ခြင်းတွေကနေ သင်ယူမှုတွေပြုလုပ်ပါ။ ပြီးရင် သင့်ရဲ့စိတ်ကို ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ကြိုးစားပါ။ လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်လေလေ ဝင်ငွေတွေ ရှာဖွေ နိုင်လေလေပါပဲ။
(၅) စာအလွန် ဖတ်ကြတယ်
အောင်မြင်သူအများစုရဲ့ အတိတ်ကအချိန်တွေ ပြန်ကြည့်ရင် သူတို့ဟာ မအောင်မြင်ခင်ကတည်းက စာအလွန်ဖတ်ကြတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်သူတွေက တစ်ယောက်တည်း နေရတာကို ပိုပြီး ပျော်ရွှင် သဘောကျတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း တိတ်တိတ်လေးနေပြီး စာဖတ်ဖို့ အခွင့်အရေးယူမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ စိတ်ခွန်အားအတွက်နဲ့ အနာဂါတ်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အသံဖိုင်တွေ ဟောပြောပွဲတွေကို နားထောင်နေတတ်ပါတယ်။
(၆) အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချကြတယ်
အောင်မြင်သူတွေဟာ အကျိုးမရှိတာတွေအတွက် အချိန်မပေးကြဘူး။ အလေ့အလွင့်ခံလေ့ မရှိကြပါဘူး။ ဘာဝတ်မယ်၊ ဘာစားမယ်၊ ဘာဝယ်မယ် စသဖြင့် fashion design တွေ၊ အစားအသောက်တွေ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး အချိန်ကုန် မခံတတ်ကြပါဘူး။
(၇) သူတို့ဟာ စွန့်စားမှုကိုသဘောကျကြပါတယ်
သင်ဟာ ထီလက်မှတ် မဝယ်ဘူးဆိုရင် ထီပေါက်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မစွန့်စားရဲရင် အောင်မြင်မှုဆိုတာလည်း ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အောင်မြင်သူတွေဟာ သူတို့ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်ဖို့ စွန့်စားရမယ့် အချိန်တွေရောက် လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကို နားလည်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလျင်မလိုတတ်ကြပါဘူး။ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်လာဖို့ စိတ်ရှည်တတ်ကြပါသေးတယ်။ စွန့်စားဖို့ လိုအပ်မှလည်း စွန့်စားတာက ကောင်းပါတယ်။
(၈) အောင်မြင်သူတွေဟာ အတားအဆီးတွေ ကျော်ဖြတ်လို့ ရှေ့ဆက်သွားကြတယ်
ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရဲ့ဘဝမှာ အနှောင့်အယှက်ဆိုတာ ရှိနေမှာပါ။ စိတ်ကူးအိပ်မက်ရှိတဲ့လူတိုင်း အရှုံးတရားတွေကို ခံစားကြရတာပါပဲ။ အများစုကတော့ အရှုံးပေးပြီး ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ထွက်မပြေးကြပါဘူး။ သူတို့က ရှေ့ဆက်သွားကြပါတယ်။
(၉) အောင်မြင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာကြတယ်
အောင်မြင်သူတွေဟာ အခက်အခဲတွေကြားက ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာကြပါတယ်။ နည်းလမ်းတစ်ခုက အလုပ်မဖြစ်ရင် အလုပ်ဖြစ်မယ့် နောက်ထပ် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရှာဖွေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲ ကြပါဘူး။
(၁၀) သူတို့ဟာ သူတို့ချစ်တာကိုပဲ လုပ်ကြတယ်
သင်ချစ်တာကို သင်မလုပ်ရင် သင်ဟာ အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့တော့ အတိအကျပြောလို့ မရတော့ဘူး။ ပိုက်ဆံအတွက် သင့်ဘဝရဲ့ အချိန်အများစုကို သင်ဝါသနာ မပါတဲ့အရာတွေလုပ်ရင်း ဖြုန်းတီးနေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အောင်မြင်နေတဲ့ ဘဝတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။
ဘဝအခြေအနေအရ သင်ဝါသနာမပါတာကို လုပ်နေရချိန်မှာ ခဏလောက် သည်းခံထားပါ။ ဒါပေမယ့် သင်ချစ်တဲ့အရာကို လုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ကြောက်ရွံ့ မနေပါနဲ့။ ငွေကြေးတစ်ခုထဲ နောက်ကိုလဲ မလိုက်ပါနဲ့။